LEGO Boost Move Hub: Ikanam agba nzuzo, ịtọgharị na ndị ọzọ - Ikkaro
Inicio >> Ihe eji egwuri egwu >> Lego Boost Move Hub
El Lego Boost robotics kit ọ dabere na akụkụ atọ na-arụ ọrụ, nke a na-achịkọta ndị ọzọ niile.
Ihe kachasị mkpa bụ Move Hub nke nwere moto nwere 2 axes na modul Bluetooth iji jikọọ na mbadamba nkume ma ọ bụ mobile. Ebe ọ bụ na ihe niile dị na Boost na-eme site na ngwa ya.
Mpempe abụọ ndị ọzọ bụ moto nke abụọ na mmetụta dị nso na agba.
Dịka m chọtara obere ozi gbasara brik ndị a, ana m ahapụ ihe niile m hụrụ ebe a ma echere m na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ inwe ike iji ya nke ọma.
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịmata kit ahụ wee hụ ihe na - akwụsị m, kanye n’elu m LEGO Nkwado Ntuziaka
Bugharịa Hub Ikanam Agba Code
The Move Hub nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ikanam na-egosi dị iche iche na-ekwu, ma ahụbeghị m ozi a na ngwa ahụ. Yabụ, mgbe ịchọchara, n'etiti websaịtị gọọmentị na GitHub, M hapụrụ gị mkpokọta nke ihe agba agba ọ bụla pụtara
Ìhè na-acha ọcha na obere ọkụ. Ọ bụ ọnọdụ pareo. Ingpị bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-agba mbọ ijikọ site na Bluetooth maka sekọnd 20
Ìhè na-acha ọcha na-acha ọcha na ọkụ dị ogologo. Ngwaọrụ na-atọgharị
Na-adịgide adịgide acha anụnụ anụnụ ìhè. Ejikọtara Bluetooth ma ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma
Na-egbu maramara oroma. Batrị dị ala. Na nke a, enwere batrị AAA isii (LR6 na 03V)
Uhie, acha akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ na-acha ọkụ. Ngwa nke mbadamba nkume ma ọ bụ mobile amanyela ngwa ngwa ngwa ngwa nke Move Hub. Agba nke ntabi ga-ọzọ. Dị ka ibe gọọmentị femụwe update kwesịrị-ewe ihe karịrị 15 nkeji.
Anyị maara nke ahụ otu isi ihe adịghị ike nke ngwa LEGO a bụ akwụkwọ ya. Enwere m olileanya na n'oge na-adịghị anya, etinyere batrị ahụ ma mee ka ọ dị ma nweta ya.
Etu ị gha esi degharịa Move Hub
Dị ka a tụlere n'azụ akwụkwọ ozi na-abịa na igbe ahụ, nnyonye nke electromagnetic siri ike nwere ike imebi ọrụ nke ngwaahịa ahụ. Ọ bụrụ otu a, tọgharịa ngwaahịa ma gaa n’ihu n’ihu jiri ya eme ihe.
Ka anyị tọgharịa ya. Maka nke a n'onyinyo a gbara anyị ume pịa ma jide bọtịnụ Hub na-acha akwụkwọ ndụ maka 10 sekọnd.
Otu esi amata ma ngwaọrụ m dakọtara na LEGO Boost
Otu esi agbanwe batrị
N’ala ala enwere ihe nkpuchi nwere ihe nkedo. Naanị ị ga-ewepụ ma wepu ngọngọ nke na-abịa ụzọ abụọ batrị AAA, ya bụ, batrị 6.
Na-ele anya nke ọma na foto a
Cheta na anyị bipụtara a aghụghọ na- amanye njikọ Bluetooth, mgbe ị na-achọghị ijikọ.
Categories Eletrọniki, Ihe eji egwuri egwu Igodo bọtịnụ
Etu esi agba oso .sh
1 Bugharịa Hub Ikanam Agba Code
2 Etu ị gha esi degharịa Move Hub
3 Otu esi agbanwe batrị
4 Ihe ndị ọzọ